सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार जना रोजगारीमा आवद्ध - Laganikhabar
सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार जना रोजगारीमा आवद्ध
शनिबार, १५ जेठ २०७८, १२ : ५४ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौं - सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आवद्ध छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार ४०४ र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार २७९ रहेको छ ।
आव २०७६/७७ मा सार्वजनिक संस्थानको प्रत्यक्ष रोजगारीले नेपालको कूल रोजगारी ७० लाख ८६ हजारको शून्य दशमलव चार प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सार्वजनिक संस्थानको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएकाे अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७६/७७ को संशोधित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ३९ खर्ब १४ अर्ब ७० करोडमा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आयको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कूल रु १९ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख आयकर दाखिला गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७६/७७ मा संस्थानको कूल आय गत वर्षको तुलनामा छ दशमलव ९१ प्रतिशतले घट्न गई रु चार अर्ब ६० करोड ३८ लाख रहन गएको छ । (रासस)
खाने हैन त जागिर ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग्यो ठुलो संख्यामा कर्मचारी
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने रोजगारदाताहरुका संस्थाहरुको सहमति
जागिर खाने हो ? जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तलाई कर्मचारी चाहियो
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? नेपाल बैंकले माग्यो ठुलो संख्यामा कर्मचारी
जागिर खाने हो ? समृद्धि फाइनान्सलाई कर्मचारी चाहियो
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? बैंकमा जागिर खाने सुनौलो अवसर